Testosterone Enanthate ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု CAS 315-37-7 Testosterone ကုန်ကြမ်းအမှုန့်ကို မြန်ဆန်ပြီး ဘေးကင်းစွာ ပို့ဆောင်ခြင်း
အမျိုးအစား-Anabolic Steroids များ
ပျော်ရည်များ-benzyl အရက်နှင့် benzyl benzoate
ဘုံအမည်များ-Testoxyl၊ Testosterona၊ Testodex၊ Enantat၊ Testoviron၊ Cidotestone၊ Testobilin၊ Enanthate၊ Test E၊ TestaPlex E၊ Enantrex၊ Enantbolic၊ Testofort၊ Testonova၊ Androfil၊ Nuvir၊ Asset-250၊ Menocare၊ Delatestryl၊ Cidotestone၊ Testobolin
Testosterone Enanthate 250mg/mL နောက်ထပ် ထိုးဆေးချက်ပြုတ်နည်းများ
100mL N အတွက် အသုံးများသော 250mg/mL ချက်နည်း
Testosterone Ethanate အမှုန့် 25 ဂရမ် (18.75mL)
ဆီ 76.25 မီလီလီတာ
100mL အတွက် အသုံးများသော 250mg/mL ကြော်နည်း BB No BB #2
ဆီ 78.25 မီလီလီတာ
100mL အတွက် အသုံးများသော 250mg/mL ချက်နည်း
ဆီ 69.25 မီလီလီတာ
100mL အတွက် အသုံးများသော 300mg/mL ချက်နည်း
30 ဂရမ် Testosterone Ethanate အမှုန့် (22.5 mL)
ဆီ 60.5 ml
100mL အတွက် အသုံးများသော 400mg/mL ချက်နည်း
Testosterone Ethanate အမှုန့် 40 ဂရမ် (30 mL)
Test Enanthate ဖော်ပြချက်
Testosterone Enanthate သည် အားကစားသမားများနှင့် ကိုယ်ကာယတည်ဆောက်သူများ နှစ်မျိုးလုံးတွင် အသုံးများသော Testosterone ၏ ထိုးဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် Testosterone cypionate နှင့် ဆင်တူပြီး ၎င်းတွင် ပြင်းထန်သော androgenic နှင့် anabolic အာနိသင်များရှိသည်။ဤအဆီဖျော်ရည်သည် ကြွက်သားကြီးထွားမှု၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အစာစားချင်စိတ်ကို မြှင့်တင်ပေးပါသည်။Testosterone enanthate သည် အလွန်အစွမ်းထက်ပြီး အရွယ်ရောက်ပြီးသူအများစုတွင် သည်းခံနိုင်စွမ်းကို မြင့်မားစေသည်။ကုသရေးအေးဂျင့်အနေဖြင့် Testosterone Enanthate ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် သင့်ဘဝကို သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။
Test Enanthate သည် Androgen မှ Steroid ဟော်မုန်းတစ်မျိုးဖြစ်ပြီး နို့တိုက်သတ္တဝါများနှင့် အခြားကျောရိုးရှိသတ္တဝါများတွင်တွေ့ရှိရသည်၊ Test Enanthate သည် အက်ဒရီနယ်ဂလင်းမှလျှို့ဝှက်ချက်အနည်းငယ်သာရှိသော်လည်း၊ Test Enanthate သည် အမျိုးသမီးများ၏သားဥအိမ်စမ်းသပ်မှုတွင် အဓိကလျှို့ဝှက်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ အမျိုးသားလိင်ဟော်မုန်းနှင့် anabolic စတီးရွိုက်။
Test enanthate ကို အားကစားသမားများနှင့် ခန္ဓာကိုယ်တည်ဆောက်သူများအချို့က အလွဲသုံးစားလုပ်ကြသည်။Testoster-one ၏ enanthate ဗားရှင်းသည် ကြွက်သားကြီးထွားမှု၊ အဆီဆုံးရှုံးမှု၊ သက်လုံကောင်းစေရန်၊ ပြင်းထန်သောလေ့ကျင့်ခန်းများကို ကိုင်တွယ်နိုင်စွမ်းနှင့် ဒဏ်ရာရပြီးနောက် ပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ပေးသည့်ဆေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။Test enanthate သည် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစားသမားများ၊ အထူးသဖြင့် အားကစားသမားများနှင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အလေးမသမားများနှင့် ကာယဗလသမားများ၊ အလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်း သို့မဟုတ် အဆင့်နိမ့်နေပါက ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများမှ ကင်းစင်ခြင်းအပြင် ကြွက်သားအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်၊ ပရိုတိန်းပေါင်းစပ်မှုနှင့် နိုက်ထရိုဂျင်ထိန်းသိမ်းမှုအဆင့်များကို တိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးသောကြောင့် ၎င်းသည် ကျွမ်းကျင်သော အားကစားသမားများ၏ လေးစားမှုကိုခံရပါသည်။စတီးရွိုက်ကို hypogonadal အမျိုးသားများကို ကုသရန် သို့မဟုတ် ဂရုတစိုက်ရွေးချယ်ထားသော အမျိုးသားများတွင် အပျိုဖော်ဝင်ခြင်းကို လှုံ့ဆော်ရန်အတွက် testosterone အစားထိုးကုထုံး၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်လည်း အသုံးပြုပါသည်။
Enanthate လျှောက်လွှာကို စမ်းသပ်ပါ။
Testosterone enanthate ကို ကိုယ်ခန္ဓာတည်ဆောက်သူများသည် ကြွက်သားအလေးချိန်တိုးစေရန်အတွက် ယေဘူယျအားဖြင့် အသုံးပြုပါသည်။ ထို့အပြင် Testosterone enanthate သည် Testosterone ၏အသုံးအများဆုံးပုံစံဖြစ်သည်။ကြွက်သားနှင့် ခွန်အားရရှိရန် အလွန်အားကောင်းသော်လည်း တစ်ချိန်တည်းမှာပင် ၎င်းသည် စျေးသက်သက်သာသာနှင့် ရရှိနိုင်သည်။Testosterone enanthate သည် ကြာရှည်ခံသော တစ်ခုတည်းသော ester steroid ဖြစ်သည်။၎င်းသည် ကာဗွန်7အရှည်ရှိသည်။esterified steroid ပမာဏကို သောက်သုံးသောအခါ စုစုပေါင်းအလေးချိန်သည် ester weight နှင့် steroid နှစ်ခုလုံးကို ပေါင်းစပ်ထားသည်။ ထို့ကြောင့် Testosterone enanthate သည် cypionate နှင့် sustanon ထက်ပို၍ ဦးစားပေးပါသည်။အကယ်၍ သင်သည် ပထမဆုံးအသုံးပြုသူဖြစ်ပါက enanthate သို့မဟုတ် cypionate ကိုသောက်သုံးရန်သင့်အားကျွန်ုပ်တို့အကြံပြုလိုပါသည်။၎င်းတို့၏ ester များသည် propionate ထက် ပိုရှည်သောကြောင့် ဤနည်းဖြင့်သင်သည် ဆေးထိုးသည့်အရေအတွက်ကို လျှော့ချနိုင်မည်ဖြစ်သည်။Testosterone enanthate သည် sustanon ထက် အနည်းငယ်ပို၍ အနံ့ထွက်သည်၊ ထို့ကြောင့် gynocomastia ကိုကာကွယ်ရန် nolvadex နှင့် clomid ကဲ့သို့သော anti-estrogens များနှင့်အတူ gynocomastia ကိုအသုံးပြုသင့်သည်။
Enanthate Dosage ကို စမ်းသပ်ပါ။
ယေဘုယျသောက်သုံးသောပမာဏမှာ တစ်ပတ်လျှင် 250mg မှ 750mg ဖြစ်သည်။
အာရုံစူးစိုက်မှု- အဆင့်သည် အတော်လေး လုံလောက်ပြီး သုံးစွဲသူအား ခွန်အားနှင့် ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ကို လျင်မြန်စွာ ရရှိစေသင့်သည်။ဤအဆင့်ထက် estrogenic ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသည် ရရှိလာသော ကြွက်သားအသစ်များ၏ အလေးချိန်ကို သိသိသာသာ ပိုသိသာလာမည်မှာ သေချာပါသည်။
Test E 250 Oil ပြုလုပ်နည်း
အဆင့် 1: Test E အမှုန့်ကို ကရားထဲသို့ထည့်ပါ။
အဆင့် 2: BA ကို ကရားထဲသို့ထည့်ပါ။
အဆင့် 3: BB ကို beaker ထဲသို့ထည့်ပါ။
အဆင့် 4: ကရားကို အပူပေးစက်ပေါ်တွင် တင်ပါ၊ အပူချိန်မှာ 80 ºC ခန့်ဖြစ်သည်။ဖန်တံကိုအသုံးပြု၍ အမှုန့်အရည်ထဲသို့ လုံးလုံးပျော်သွားသည်အထိ အရည်ကို မွှေပေးပါ၊ ထို့နောက် ကြည်လင်သောအဝါရောင်ဖြစ်လာပါမည်။
အဆင့် 5: ကရားကို အပူပေးစက်မှချ၍ ပွင့်လင်းသောအဝါရောင်အရည် အေးသွားသည်အထိ စောင့်ပါ။
အဆင့်6: EO ကို ကရားထဲသို့ထည့်ပါ၊ အရည်ကို အဝါရောင်အဝါရောင်အရည်အဖြစ်ပြန်သည်အထိမွှေရန် ဖန်ချောင်းကိုအသုံးပြုပါ။
အဆင့် 7- အရည်ကို ပိုးသတ်ထားသော ဇကာ သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်စက်ဖြင့် စစ်ထုတ်ပါ။
ဆေးမထိုးခင် Test E နာကျင်မှုကို ဘယ်လိုကာကွယ်မလဲ။
1. ရှည်လျားသော esters အတွက် <=200 နှင့် တိုတောင်းသော esters အတွက် <=100 ရရှိရန် ပိုးမွှားဖြတ်ဆီဖြင့် ရောနှောထားသော ဒြပ်ပေါင်းကို သန့်စင်သောဆီဖြင့် ရောမွှေပါ။
2. b-12 ကို အနှောက်အယှက် မပြုပါနှင့်၊ ၎င်း၏ ရေကို အခြေခံ၍ လျင်မြန်စွာ စုပ်ယူနိုင်သောကြောင့် အကျိုးသက်ရောက်မှု အနည်းငယ်မျှ မရှိပါ။
3. ပျစ်ခဲလာစေရန် ဆီကို ညင်သာစွာပူပေးပါ။ဖန်ပုလင်းကို ရေချိုးခန်းထဲမှာထည့်ထားပြီး ရေနွေးအိုးပေါ်ကို ၂ မိနစ်လောက်ထားပြီး မွှေပေးနိုင်ပါတယ်။၎င်းသည် အဆီများ viscosity ကို လျှော့ချပေးကာ ဆေးထိုးပြွတ်ထဲသို့ ဆွဲယူရာတွင် ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
4. ကြွက်သား fascia ရွှေ့ပြောင်းခြင်းကို လျှော့ချရန် အလွန်နှေးကွေးစွာ ထိုးသွင်းပါ၊ ml လျှင် စက္ကန့် 30 ကြာသည်။ထိုးသွင်းရန် 25g pin ကိုအသုံးပြု၍ ဖြည်းဖြည်းချင်းရွေ့လျားရန် တွန်းအားပေးသည်။
5. propionate နှင့် phenylpropionate estetrs များသို့ ပမာဏအလိုက် 20% Benzyl Benzoate ကို ပေါင်းထည့်ပါ။
6. သေးငယ်သော ဆေးထိုးအပ်များမှ မြင့်မားသော အထွက်ဖိအားကို တားဆီးရန် 23g အပ်ကို အသုံးပြုပါ။
7. ပမာဏနည်းသော၊ ကြွက်သားကြီးများအတွက် <3ml နှင့် သေးငယ်သောကြွက်သားများအတွက် <2ml မကြာခဏ ထိုးပေးပါ။
8. ထိုးဆေးသည် ကြွက်သားအတွင်းပိုင်းအထိ နက်ရှိုင်းပြီး အရေပြားအောက်ရှိ အဆီများမှတဆင့် အပြည့်အ၀သေချာစေပါ။
9. ဆေးမထိုးမီ တစ်နာရီအလိုတွင် 100mg Benadryl ကိုလည်း ထည့်နိုင်သည်။ဆေးမထိုးမီ တစ်နာရီအလိုတွင် ibuprofen 800mg။
ထိုးဆေး Steroid အဆီများစာရင်း
Testosterone စီးရီး Methenolone စီးရီး
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No
Testosterone Enanthate ၃၁၅-၃၇-၇ Methenolone Enanthate ၃၀၃-၄၂-၄
တက်စတိုစတီရုန်း ၅၈-၂၂-၀ Methenolone Acetate ၄၃၄-၀၅-၉
Testosterone Acetate ၁၀၄၅-၆၉-၈ ခံတွင်း Steroids
Testosterone Propionate ၅၇-၈၅-၂ ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No
Testosterone Cypionate ၅၈-၂၀-၈ Oxymetholone (Anadrol) ၄၃၄-၀၇-၁
တက်စတိုစတီရုန်း Phenylpropionate ၁၂၅၅-၄၉-၈ Oxandrolone (Anavar၊ Oxandrin) ၅၃-၃၉-၄
Testosterone Isocaproate ၁၅၂၆၂-၈၆-၉ Stanozolol (winstrol) ၁၀၄၁၈-၀၃-၈
Testosterone Decanoate ၊ ၅၇၂၁-၉၁-၅ Methandienone (Dianabol) ၇၂-၆၃-၉
Testosterone Undecanoate ၅၉၄၉-၄၄-၀ SARMS
Sustanon 250 ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No
Nandrolone စီးရီး Cardarine (GW-501516) ၃၁၇၃၁၈-၇၀-၀
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No Andarine (S4) ၄၀၁၉၀၀-၄၀-၁
Nandrolone ၄၃၄-၂၂-၀ Ligandrol (LGD-4033) ၁၁၆၅၉၁၀-၂၂-၄
Nandrolone Decanoate ဆေး ၃၆၀-၇၀-၃ Ibutamoren (MK-677) 159752-10-0
Nandrolone phenylpropionate ၆၂-၉၀-၈ RAD140 118237-47-0
Trenbolone စီးရီး SR9009 ၁၃၇၉၆၈၆-၃၀-၂
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No YK11 ၄၃၁၅၇၉-၃၄-၉
Trenbolone ၁၀၁၆၁-၃၃-၈ Ostarine (MK-2866)၊ ၈၄၁၂၀၅-၄၇-၈
Trenbolone Acetate ၁၀၁၆၁-၃၄-၉ လိင်ကိုမြှင့်တင်ခြင်း။
Trenbolone Enanthate ၁၀၁၆၁-၃၃-၈ ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No
Boldenone စီးရီး Tadalafil (Cialis) ၁၇၁၅၉၆-၂၉-၅
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No Sildenafil citrate 171599-83-0
Boldenone ၈၄၆-၄၈-၀ Vardenafil ၂၂၄၇၈၉-၁၅-၅
Boldenone undecylenate ၁၃၁၀၃-၃၄-၉ ဟိုက်ဒရိုကလိုရိုက် ၁၁၉၃၅၆-၇၇-၃
DEHA Dutasteride (Avodart) ၁၆၄၆၅၆-၂၃-၉
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No Finasteride ၉၈၃၁၉-၂၆-၇
Epiandrosterone ဆေး ၄၈၁-၂၉-၈ Yohimbine HCl (ထုတ်ယူ) ၆၅-၁၉-၀
Dehydroisoandrosterone (DHEA) ၅၃-၄၃-၀ အကိုက်အခဲပျောက်ဆေး
Dehydroisoandrosterone 3-acetate ၈၅၃-၂၃-၆ ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No
7-Keto-dehydroepiandrosterone ၅၆၆-၁၉-၈ Phenacetin ၆၂-၄၄-၂
Drostanolone စီးရီး Benzocaine ၁၉၉၄/၉/၇
ထုတ်ကုန်အမည် CAS.No Lidocaine HCL ၂၃၂၃၉-၈၈-၅
Drostanolone Propionate ၅၂၁-၁၂-၀ ပါရာစီတမော ၁၀၃-၉၀-၂
Drostanolone Enanthate ၄၇၂-၆၁-၁ Dimethocaine ၁၃၆-၄၇-၀
Methasterone ၃၃၈၁-၈၈-၂ Dyclonine HCL ၈၅၄၀၅၆-၀၇-၆
ပါးစပ်နှင့် ဆေးထိုးခြင်း စတီးရွိုက်ပူခြင်း။
Methandienone (Dianabol) ထိုးဆေး 50mg/ml
Oxymetholone (Anadrol) ထိုးဆေး 50mg/ml
Nandrolone Decanoate ဆေး 250mg/ml
Drostanolone propionate (မာစတာရွန်) 100mg/ml
စမ်းသပ်မှု ၄၀၀ TMT300
စမ်းသပ်မှု 500 Mass Stack 500
စမ်းသပ်မှု ၃၀၀ Andro Test 450
စမ်းသပ်မှု 300 သုံးခု FMJ 300
စမ်းသုံးချက် ၁၈၀ Cutting Blen ၁၇၅
ကလေးသုံးယောက် ၃၀၀ Anomass 400
Rip Blend ၃၇၅ TMT Blend 250
ထုပ်ပိုးမှု-10ml/ vial၊ 10vial/box(Aluminum foil bag)၊10vial/box(Aluminum foil bag)
သိုလှောင်မှု-အေးပြီး ခြောက်သွေ့အောင် အလုံပိတ် ကွန်တိန်နာထဲမှာ သိမ်းဆည်းပါ။အစိုဓာတ်နှင့် ခိုင်ခံ့သောအလင်းရောင်/အပူနှင့် ဝေးဝေးထားပါ။
ပို့ဆောင်ခြင်း-အများအားဖြင့် ငွေပေးချေပြီး ၃-၅ ရက်အတွင်း အလုပ်လုပ်ကြသည်။
သင်္ဘောဖြင့်ကုန်ပစ္စည်းပို့ခြင်း:50KG ထက်နည်းသော အရေအတွက်အတွက် EMS၊ DHL၊ TNT၊ UPS၊ FEDEX၊ AIR၊ SEA၊ DHL Express၊ FedEx နှင့် EMS၊ များသောအားဖြင့် DDU ဝန်ဆောင်မှုအဖြစ် ခေါ်သည်၊ ပမာဏ 500KG ကျော်အတွက် ပင်လယ်ရေကြောင်းပို့ဆောင်မှု၊နှင့် 50KG အထက်များအတွက် လေကြောင်းပို့ဆောင်မှု ရရှိနိုင်ပါသည်; တန်ဖိုးမြင့်ထုတ်ကုန်များအတွက်၊ အန္တရာယ်ကင်းစေရန်အတွက် လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးနှင့် DHL အမြန်ကို ရွေးချယ်ပါ။ ပက်ကေ့ဂျ်အားလုံးသည် လျှို့ဝှက်ရေးနှင့် ဘေးကင်းမှု၊ လျင်မြန်ပြီး လုံခြုံသော သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၊ ကုန်စည်စီးဆင်းမှုကို ခြေရာခံနိုင်သော ဘီလ်နံပါတ် ပါရှိသည်
Q1: အော်ဒါမတင်မီ ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကို မည်သို့အတည်ပြုရမည်နည်း။
A: အခမဲ့နမူနာများ ရနိုင်သော်လည်း ကုန်စည်ပို့ဆောင်ခသည် သင့်အကောင့်တွင် ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ကျသင့်ငွေများကို သင့်ထံ ပြန်ပေးမည် သို့မဟုတ် နောင်တွင် သင့်မှာယူမှုမှ နုတ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
A: သေချာပါတယ်၊ ၎င်းသည်သင်၏ qty ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ပိုကြီးသောအမှာစာသည်ပိုမိုသက်သာသောစျေးနှုန်းကိုခံစားနိုင်သည်။
A: ပုံမှန်အားဖြင့် သင့်ငွေပေးချေမှုကို အတည်ပြုပြီးနောက်2မှ3ရက်အတွင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် 100% အကောက်ခွန်ရှင်းလင်းမှုအတွက် Stealth Packing ကိုစီစဉ်ရန်အချိန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
Q4-စိတ်ကြိုက်ပြဿနာမရှိဘဲ ကျွန်ုပ်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို ရနိုင်သည်ဟု အာမခံနိုင်ပါသလား။
ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့တွင် Reship Service ရှိသည်။ သင့်ကုန်ပစ္စည်းများကို မည်သည့်ပြဿနာမှမရှိဘဲ သင်ရနိုင်သည်။
Q5: အရည်အသွေးဆိုင်ရာ တိုင်ကြားချက်ကို သင်မည်ကဲ့သို့ ဆက်ဆံသနည်း။
A: ပထမဦးစွာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးထိန်းချုပ်မှုသည် အရည်အသွေးပြဿနာကို သုညအနီးသို့လျှော့ချပေးမည်ဖြစ်သည်။ကျွန်ုပ်တို့ကြောင့် အမှန်တကယ် အရည်အသွေး ပြဿနာတစ်ခု ရှိပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်အား အစားထိုးရန်အတွက် အခမဲ့ ကုန်ပစ္စည်းများ ပေးပို့ပါမည် သို့မဟုတ် သင့်ဆုံးရှုံးမှုကို ပြန်အမ်းပေးပါမည်။
Q6: မည်သည့်ငွေပေးချေမှုစည်းကမ်းချက်များကို သင်လက်ခံပါသလဲ။
A: မည်သည့်အမိန့်စာအတွက်မဆို Paypal၊ Bitcoin၊ T/T၊ Western Union သို့မဟုတ် Money Gram ဖြင့်ပေးချေနိုင်ပါသည်။
A: ကျွန်ုပ်တို့သည် အီးမေးလ်၊ whatsapp၊ wickr me၊ wechat၊ စသည်တို့ကို အသုံးပြုပါသည်။ထို့ကြောင့် သင့်တွင် လိုအပ်ချက်များရှိပါက ကျွန်ုပ်အား အခမဲ့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
ယခင်- High Purity UK USA ပြည်တွင်း သင်္ဘောတင် ပို့ဆောင်ရေး ဟော်မုန်း Steroids Sarm AICAR Powder ၊
နောက်တစ်ခု: ကြွက်သားထုထည်အတွက် Testosterone Enanthate Injectable Anabolic Steroids Test E Enanject 250mg/ml
လေ့ကျင့်ခန်း ခံနိုင်ရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း
Enanthate အမှုန့်ကို စမ်းသပ်ပါ။
99% Purity parabolan Trenbolone Enanthate ကုန်ကြမ်း P...
Testosterone Enanthate Ra အတွက် အလှကုန် Package...
Testosterone Enanthate ကြွက်သားတည်ဆောက်မှု CAS 315-...
ဆေးဝါး အလယ်အလတ် Deca Test Enanthate...
Test E Steroids Powder ကာယဗလဆေးဆိုင်...